वडामै पुगेर कोरोना परीक्षण गर्दै वीरेन्द्रनगर
वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र रहेका १६ वटामा कोरोना परीक्षण शुरू गरेको छ । संक्रमण टोल–टोलमा पुगेपछि वडा–वडामा परीक्षण थालिएको नगरपालिकाले बताएको छ ।
यसअघिसम्म वीरेन्द्रनगरमै रहेको कट्कुवा स्वास्थ्य चौकीमा हप्तामा तीन दिन मात्रै कोरोना परीक्षण हुँदै आएको थियो । तर, अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेकाले समुदायस्तरमा थप संक्रमण फैलिन नदिन नगरपालिकाले परीक्षणको दायरा बढाउन लागेको हो ।
नगरपालिकाले बुधवार वडा नं. १३ को वडा स्वास्थ्यचौकी र नगरपालिका परिसरमा स्वाब संकलन तथा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । त्यस्तै, २० गते बिहीवार वडा नं. ४ को भैरवस्थान स्कुल र वडा नं ९ को स्वास्थ्यचौकी लाटीकोइली, २१ गते शुक्रवार पुनः वीरेन्द्रनगर परिसर र वडा नं. १४ को स्वास्थ्य चौकी गढी र शनिवार वीरेन्द्रनगर–२ को स्वास्थ्य चौकी उत्तरगंगामा कोरोना परीक्षण गरिएको छ । यस्तै आइतवार वडा नं १२ को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र नेवारे र वडा नं १ को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र धारापानीमा स्वाब संकलन गरिने नगरपालिकाले बताएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा वडा नं ६, ७ र ८ का स्थानीयको स्वाब संकलन गरिनेछ । यसअघि मंगलवार वडा नं ३ को हरिडिलभूमि स्कुल र वडा नं ७ को वडा कार्यालयमा स्वाब संकलन गरिएको थियो । नगरपालिकाले २३ गतेभित्रै सबै वडामा स्वाब संकलन गरिसक्ने र संक्रमणको दर हेरेर निषेधाज्ञा अन्त्य गर्ने वा कायम राख्ने एकिन हुने नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले बताए । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा यही २५ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।